Ampanihy: mijaly rano ny mpamboly, maka vola ireo zandary sasany | NewsMada
Ampanihy: mijaly rano ny mpamboly, maka vola ireo zandary sasany
Maina ny tany any Ampanihy. Mijaly ny mpamboly nefa tonga any an-toerana ny Adra manome fiofanana ireo tantsaha momba ny fambolena legioma, toy ny karaoty. “Izay vokatra kely mba miakatra, misy zandary sasany manararaotra maka vola any amin’ireny tantsaha, 2 000 Ar, 3 000 Ar…, arakaraka izay vokatra hitany eo, ankoatra ny haba efa alain’ny kaominina”, hoy ny feo voaray avy any an-toerana hampitaina ho fantatry ny tompon’andraikitra. Isaky ny tsenan’omby, tsy lazaina intsony ny mahazo azy ireo hanaovan’ny zandary sasany azy amin’ny fitangosana vola.
Isaky ny roa andro vao mba mandeha kely ny ranon’ny Jirama. Tsy hita izay fiovana hatramin’ny taona maro izay. Tamin’ny fampielezan-kevitra teo, niverina indray ny fampanantenana handavaka vovon-drano vaovao. Mitovy amin’ny faritra maro ihany io. Marina fa eo ny fiovan’ny toetr’andro fa tsy misy fanavaozana ny fotodrafitrasan’ny Jirama any Ampanihy. Mba mandeha aloha ny herinaratra.
Tsy hita intsony ny osy be volo
Nampalaza an’Ampanihy hatrany amin’ny Repoblika voalohany ny fiompiana osy be volo. Fantatra ny lazan’izany karipetra (tapis) vita amin’ny volon’osy izany tany Ampanihy, saingy tantara sisa izany. Zara raha mahita olona mbola miompy osy be volo. Nisy fotoana, nisy vazaha mpandraharaha avy any ivelany nampiditra volon’osy atao karipetra tao Ampanihy, noho ny mbola fahazain’ny mponina mikaly azy io. Telo taona izay, raha ny filzan’ny mponina any an-toerana, efa nifindra any Afrika Atsimo io vahiny io.
Fijaliana iray mampitaraina ny mponina ny fitsaboana. Tsy mitsaha-miakatra ny vola alain’ny mpitsabo manao fizahana ao amin’ny hopitalim-panjakana. Nanomboka 5 000 Ar, 10 000 Ar ary 15 000 Ar izao. Tsy misy fitaovana ny trano fandidiana ao amin’ny hopitaly fa voatery mankany Ejeda, hopitalin’ny FLM, Fotadrevo, na Toliara ho an’izay manam-bola.